Khangisa Rikoooo - Rikoooo
Rikoooo.com kusukela 2005, isayithi inkomba Avionics sekulingisa eFrance, kanye okulandwayo yethu, umphakathi wethu futhi socwaningo.
Izivakashi zethu (i-116 000 / inyanga kanye nokubukwa kwekhasi le-13 izigidi zamakhasi e-2011!) Zingabathokozisayo ngendiza yokushayela indiza, abavame ukubanikazi FSX, P3D, FS2004 kanye X-Plane, abaningi babo "abadlala kanzima". Sikunikeza ithuba lokuba nokubonakala ngokubonisa isikhangiso. Joyina abakhangisi bethu;
-Google, Microsoft, Saitek, Combat Pilot ...
ukukhangisa yakho ngendlela usayizi banner 468 by 60 pixels noma 728 by 90 Amaphikseli, Gif, Animated GIF, PNG, JPEG noma flash animated (max 100 KB). Wena ukuwusiza nge-imeyili (noma nge link uma kakade ekhona net).
Sample format amukela njengamanje:
Phezu kokuthola futhi liqinisekisa oda lakho, banner ziyobonakala kwi website ekhasini ekhaya lethu, okulandwayo noma izindaba endaweni.
Ikhasi banner 468x60 pixels
Banner 728x90 pixels page Home Play
Isigaba kanye Izigaba
Banner 728x90 pixels page Play
liveza uhlu lwamafayela anezingxenye
Sisebenzisa uhlelo professional ukuphatha ngokubonisa amabhanela yakho, ukuze ungakwazi ukucela umbukiso banner yakho ngezikhathi ezithile ngosuku (isib 16h-19h) noma anciphise isibonisi ukusibala X yezikhathi umsebenzisi ngamunye (ukunciphisa izinga osebenzisa ezinikezwa) , futhi nokuningi. I-akhawunti izokwakhiwa nge Uhlelo lwethu anikezelwe abakhangisi ukuvumela ukuba iqaphe umkhankaso wakho.
Rikoooo.com is a website qualitative kakhulu, ngokuvamile, amabhanela akhokhiswa ne CPM (Cost Per Mille) at 3.50 € net per ayizinkulungwane ukubukwa on the izindawo oyifunayo. Ukhokhela Khuluma ngezwi elithé ukuphakama ekhombisa of isikhangiso sakho. Buhle le model sixhomeke ngokuqondile iqiniso ukuthi uma Rikoooo.com umentshisi ngokuphelele lelitshe umyalezo wakho ke RIO yakho (Return on Investment) kuyoba omuhle.
* Sicela uqaphele ukuthi ezinkudlwana kuyinto CPM oda wakho abemakhulu kuyinto Iphesenti ukuncishiswa yakho.